TRF ao amin'ny Media | The Reward Foundation - Tiavo ny firaisana sy ny Internet
Home TRF ao amin'ny Media
Ny Reward Foundation dia niseho imbetsaka tamin'ny media. Ireto misy tantara vitsivitsy nanasongadina ny asanay.
Raha te hampiseho ny The Reward Foundation amin'ny sehatry ny haino aman-jery ianao dia mifandraisa azafady amin'ny Biraon'ny Gazety info@rewardfoundation.org. Manohana ny asa fanaovan-gazety kalitao izahay. Ny dinidinika ataontsika rehetra dia miorina amin'ny fikarohana farany momba ny fiantraikan'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny olona sy ny fiaraha-monina. Afaka manampy anao amin'ny fampivoarana ny tantaranao izahay. Manana traikefa amin'ny fanoratana hevitra momba ny gazety nasionaly sy ny magazine koa izahay.
Mary Sharpe dia manana traikefa iraisam-pirenena amin'ny maha-tompon'andraikitra amin'ny asa fanaovan-gazety azy. Niasa an-taonany maro tao amin'ny Vaomiera eropeana ho an'ny kaomisera eropeana ho an'ny fikarohana, fanavaozana ary siansa. Ny fanehoan-kevitra sy ny teny nalaina ho an'ny fampahalalam-baovao dia misy amin'ny fotoana fohy.
Nasongadinay tao amin'ny tantara an-tsary voalohany tao amin'ny Sunday Times Scottish Edition. Noraisin'ny masoivoho izany tany amin'ny firenena am-polony mahery. Izahay koa dia nanolotra atiny misongadina ao amin'ny The Guardian, The Telegraph ary maro any UK ary ireo tabloid Scottish.
ny Fahano YouTube manarona lohahevitra mahaliana amin'izao fotoana izao ao anatin'izany ny Autism Spectrum Disorder sy ny hoavin'ny fikarohana siantifika amin'ny fampiasana sary vetaveta misy olana.